शशिकान्त-सकुन्तला बर्मा टि–२० को सेमीफाइनल समीकरण पुरा – WicketNepal
शशिकान्त-सकुन्तला बर्मा टि–२० को सेमीफाइनल समीकरण पुरा
WicketNepal Staff, २०७३ चैत्र ९, बुधबार ००:००
रुपन्देही क्रिकेट संघको आयोजनामा भैरहवास्थित सिद्धार्थ रंगशालामा जारी शशिकान्त–सकुन्तला बर्मा टि–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा बुधबार भएको समूह ‘सि’ को पहिलो खेलमा एपेक्स क्रिकेट क्लब शंकरनगरलाई बुम एमसिसी भैरहवाले ५ विकेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा प्रवेस गरेको छ ।
एपेक्सबाट जितका लागि पाएको ५९ रनको सामान्य चुनौतीलाई पछ्याउने क्रममा एमसिसीले १५ ओभर २ बलमा लक्ष्य भेटाउँदै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्यो । उसका लागि तुलाराम थापाले सर्वाधिक १६ रन बनाए भने आनन्द गौडले १४ रन बनाए । एपेक्सका रविन्द्र साहीले २ विकेट लिए ।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपेक्स एमसिसीका अगाडि धरासायी हुँदै १६ ओभर २ बलमा ५८ रन बनाई अलआउट भयो । उसका लागि रविन्दै शाहीले १३ रन बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंक बटुल्न सकेनन् । एमसिसीका तुलाराम थापा २ विकेट लिँदै खेलको म्यान अफ द म्याच घोषित भए ।
सोही मैदानमा सम्पन्न समूह ‘डि’ को अर्को खेलमा श्री शिवशक्ति क्रिकेट क्लब भैरहवाले प्रोफेसनल मास्टर्स ११ भैरहवालाई १० रनले पराजित गरेको छ । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको शिवशक्तिले १९ ओभर ४ बलमा सबै विकेट गुमाउँदै १ सय २८ रनको योगफल बनाएको थियो । उसका लागि कृष्ण कार्कीले सर्वाधिक ३९ रन बनाए भने दीपचन शर्माले २१ रन बनाए । बलिङमा मास्टर्सका शरद रायले ४ तथा सिद्धान्तराज शाहीले २ विकेट लिए ।
जितका लागि १ सय २९ रनको लक्षयसहित मैदान छिरेको मास्टर्सले निर्धारित ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १ सय १८ जोडेर १० रनको अन्तरले पराजित भयो । उसका लागि सिद्धान्तराज शाहीले ४२, बादल छन्त्यालले १८ र अनुपम सिंहले १७ रन बनाए । शिवशक्तिका विष्णु कटरियाले ३ र अख्तर हुसेनले २ विकेट लिए । खेलको म्यान अफ द म्याच शिवशक्तिका कृष्ण कार्की घोषित भएको रुपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीबारदेखि सेमिफाइनलका खेल सुरु हुँदै छ । पहिलो खेल बुम एमसिसी भैरहवा र लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब बेलहिया तथा दोस्रो खेल वेष्टर्न क्रिकेट क्लब बुटवल र न्यू होराइजन क्रिकेट क्लब बुटवलबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
प्रतियोगिताका विजेताले नगद रु. ५० हजार र ट्रफी, उपविजेताले नगद रु. २५ हजार र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् । उत्कृष्ट खेलाडीले नगद रु. १० हजार, बेष्ट ब्याट्सम्यान तथा बेष्ट बलरले नगद रु.५÷५ हजार प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक दिनको म्यान अफ द म्याचले रु. एक हजार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिता चैत १२ गतेसम्म संचालन हुने छ ।
प्रतियोगितालाई अमेरिका निवासी विवेक बर्मा अन्सु बर्मा र अल्क बर्माले आफ्नो स्वर्गीय आमा÷बुवाको नाममा स्पोन्सर गरेका छन् । स्वर्गीय शशिकान्त बर्मा रुपन्देही जिल्लाको क्रिकेट खेलको विकासमा अम्पायर तथा खेलाडीको रुपमा योगदान पु¥याउने व्यक्तित्व मानिन्छन् भने स्वर्गीय सकुन्तला बर्मा रुपन्देही जिल्लाको महिला नेतृ थिइन् ।